Noho ny tsy fandriampahalemana : manahy adim-poko ny Sakalava | NewsMada
Noho ny tsy fandriampahalemana : manahy adim-poko ny Sakalava
Par Taratra sur 16/02/2016
Niitatra any amin’ny faritra sy ny foko hafa ny tsy fahafaham-po manoloana ny tranga eto amin’ny firenena, indrindra ny tsy fandriampahalemana. « Resy lahatra izahay ary nahatonga anay eto izao fa tena mandalo fotoan-tsarotra tokoa, ary amin’ny lafiny rehetra ny fiainam-bahoaka sy ny firenena amin’izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin’izany ny tsy filaminana sy tsy fandriampahalemana manerana ny faritra maro, indrindra any amin’ny faritra misy anay. Mety ho tonga amin’ny adim-poko izao raha tsy voafehy sy tsy ahitana vahaolana haingana », hoy ny eo anivon’ny Vovonan’ny Grand Sakalava (PGSM) tetsy Andrefan’Ambohijanahary, omaly.
Tsy vitan’izany, anisan’ny olana nambaran’izy ireo ary iraisany amin’ny faritra rehetra ny faharavana na fanimbana ny tontolo iainana sy ny faharatsian’ny lalana ary koa ny fahantrana. Manampy ireo ny tsy fananana asa, araka ny fanehoan-kevitry ny PGSM ihany.
Efa nanangam-bovona manoloana ny olana eo amin’ny resaka tsy fandriampahalemana, indrindra ny fitakiana ny marina momba ireo havany sy ny fianakaviany maty ny zanak’Antandroy ny faran’ny taona teo.
Nampiaka-peo ny depiote…
Efa nampivondrona ny heriny sy nampiaka-peo koa ireo olobe sy solombavambahoaka voafidy any amin’ny faritra Atsinanana na faritanin’i Toamasina teo aloha noho ny asan-jiolahy mahery vaika na vono olona mahatsiravina niseho tany an-toerana ny herinandro teo.
Izao indray, tsy afaka ny hangina fotsiny ireto avy amin’ny Sakalava ireto fa nametraka ny ahiahiny sy ny mety hampiitatra ny raharaha any amin’ny tsy izy, toy ny adim-poko.
An’iza indray koa na foko iza indray no hiteny na hanao fanambarana rahampitso raha mitohy izao ?
Ankoatra izany, naneho ny heviny ny amin’ny tokony ho Praiminisitra ny PGSM ka lasa lavitra mihitsy, namariparitra ny masontsivan’ny olona tokony ho amin’izany toerana izany. Mbola eo amin’ny sezany anefa aloha ny amperinasa, ny lehiben’ny governemanta Ravelonarivo Jean amin’izao fotoana izao.